Coughing Up Blood and Tuberculosis - My Doctor " );( document.contains ) || document.write( "" );( window.DOMRect ) || document.write( "" );( window.URL && window.URL.prototype && window.URLSearchParams ) || document.write( "" );( window.FormData && window.FormData.prototype.keys ) || document.write( "" );( Element.prototype.matches && Element.prototype.closest ) || document.write( "" );( "objectFit" in document.documentElement.style ) || document.write( "" );
အသကျ 20 ဝနျးကငျြ၊ ခပျပိနျပိနျအမြိုးသမီးငယျတဈဦး ဆေးခနျးထဲဝငျလာသညျ။ ယူနီဖောငျးလေးက ခပျနှမျးနှမျးပမေယျ့ အသားလေးဖွူနတေော့ ကွညျ့လိျု့တော့အဆငျပွသေညျ။
ကိုယျတိုငျကအလှကွိုကျသူမို့ ဒီကလေးမ ဒီထကျနညျးနညျးလေး ပိုပွညျ့လာလြှငျ ပိုကွညျ့ကောငျးမှာပဲဟု ကောကျခကျြခမြိသညျ။
” ဆရာမ….သမီး ခြောငျးဆိုးတာ သှေးတှပေါလို့..”
ဒီအသကျအရှယျ ..ဒီခန်ဓာကိုယျနဲ့…ခြောငျးဆိုးသှေးပါတယျ ဆိုတော့…..အငျး…ဖွဈနိုငျခကြေိုတော့ ခနျ့မှနျးလိုကျမိပွီ… သခြောအောငျ မေးခှနျးအနညျးငယျထပျမေးလိုကျတော့…
အစက သလိပျမထှကျ ၊ခြောငျးခွောကျပဲဆိုးကွောငျး
စပျဆေးတှဝေယျသောကျလိုကျ၊ခြောငျးဆိုးသကျသာရငျ ရပျထားလိုကျ၊ ပွနျဆိုးရငျ စပျဆေးထပျဂယျသောကျလိုကျလုပျနရေငျးက
မနညေ့ကမှ ခြောငျးဆိုးရငျး သှေးပါလာလို့ ကွောကျလနျ့ပွီး ဆေးနျးလာပွခွငျးဖွဈကွောငျးပွောလသေညျ။
ဒါနဲ့ အခွားရောဂါလက်ခဏာတှေ ဆကျမေးတော့ ….
ခြောငျးစဆိုးကတညျးကပငျ အဖြားမကွီးသျောငွားလညျး လူက နလေို့မကောငျး တရှောငျရှောငျဖွဈနကွေောငျး
ညဘကျအိပျလြှငျ ခြှေးစီးတှပွေနျကွောငျး ပွောလသေညျ။
” ညီမလေးက အရငျကတညျးက ခုလိုပိနျပိနျလေးပဲလား?”
” မဟုတျဘူးဆရာမ၊ သမီးက အရငျက ခုထကျအမြားကွီးပွညျ့တာပေါ့၊ ခုတလောမှ အစားအသောကျတှပေကျြပွီး ပိနျကသြှားတာဆရာမရယျ…လူကိုဆှဲခလြိုကျသလိုပဲ….မကျြကှငျးတှပေါညိုကပြွီး သိသိသာသာကိုပိနျသှားတာ…. ခြောငျးတှဆေိုးရပါမြားလို့လားမသိဘူးဆရာမရယျ…ရငျဘတျတှတေောငျအောငျ့တယျ ”
” သမီးအရငျက တီဘီဖွဈဖူးလား၊ အခွားဘာရောဂါတှဖွေဈဖူးလဲ?”
“မဖွဈဖူးဘူးဆရာမ၊ ဆေးရုံဆေးခနျးတောငျ ပွရခဲတယျ”
“ဒါဆို…အိမျမှာ ဒါမှမဟုတျ အလုပျတို့၊ အိမျနားဝနိးကငျြတို့မှာရော တီဘီဖွဈဖူးတဲ့သူရှိလား?”
“အငျး…အဲ့လိုတော့ရှိတယျဆရာမ… လှနျခဲ့တဲ့ ခွောကျလလောကျကတော့ ရှာက ဦးလေးတဈယောကျ သမီးတို့အိမျမှာ တဈလလောကျလာတညျးရငျး
ခြောငျးဆိုးတာရကျကွာနလေို့ ဆေးရုံသှားပွတာ ဆရာဝနျက TB ရှိတယျပွောလို့ TB ဆေးသောကျရတယျ….ခုတော့ ရှာပွနျသှားပါပွီ”..
“သမီးခုဖွဈနတေဲ့ လက်ခဏာတှအေားလုံးခွုံကွညျ့လိုကျရငျတော့ TB ဖွဈနိုငျခအြေတျောမြားတယျ၊ပိုသခြောအောငျ ရငျဘတျ ဓာတျမှနျလေးရိုကျ၊ မနကျပိုငျးထှကျတဲ့ သလိပျလေး ၃ရကျ ဆကျတိုကျစဈပွီး ဆရာမဆီ အဖွလေေးတှေ လာပွနျပွပေး ပါလား ”
ဓာတျမှနျအဖွရေော သလိပျအဖွရေော ယူလာပွီးလာပွသညျ။
ကလေးမကို ပွောပွတော့ငိုသညျ….အလုပျထှကျရမှာကွောကျလို့တဲ့….အငျးပေါ့… သူစိတျပူလညျးပူခငျြစရာလေ…
ခုခတျေက အလုပျတဈခုရဖို့လှယျတာမှ မဟုတျတာပဲ…..
TB ဆေးစသောကျပွီး နှဈပတျကွာလြှငျ အခွားသူတှဆေီ ကူးသကျနိုငျခမြေရှိတော့ကွောငျး…
ဆေးစသောကျတဲ့အခြိနိကစလို့ နှဈပတျအတှငျးကိုတော့ မိသားစုမြားနဲ့လုပျဖျောကိုငျဖကျမြားဆီမကူးစကျအောငျ နှာခေါငျးစညျး (mask) တပျထားရမညျဖွဈကွောငျး၊ အလုပျထှကျဖို့ထိ မလိုအပျကွောငျး၊ ဆေးကို ၆လပွညျ့သညျအထိ ပုံမှနျသောကျသငျ့ကွောငျး၊ ၆လမပွညျ့ဘဲဆေးရပျလိုကျလြှငျ နောကျပိုငျးမှာ ဆေးယဉျပါးတီဘီဖွဈလာနိုငျပွီး ကုသရနျမလှယျကူကွောငျး… စသဖွငျ့ လိုအပျတာတှရှေငျးပွနှဈသိမျ့အပွီး TB ဆေးထုတျယူနိုငျရနျသကျဆိုငျရာဒသေန်တရဆရာဝနျထံ
အသက် 20 ဝန်းကျင်၊ ခပ်ပိန်ပိန်အမျိုးသမီးငယ်တစ်ဦး ဆေးခန်းထဲဝင်လာသည်။ ယူနီဖောင်းလေးက ခပ်နွမ်းနွမ်းပေမယ့် အသားလေးဖြူနေတော့ ကြည့်လို့်တော့အဆင်ပြေသည်။
ကိုယ်တိုင်ကအလှကြိုက်သူမို့ ဒီကလေးမ ဒီထက်နည်းနည်းလေး ပိုပြည့်လာလျှင် ပိုကြည့်ကောင်းမှာပဲဟု ကောက်ချက်ချမိသည်။
” ဆရာမ….သမီး ချောင်းဆိုးတာ သွေးတွေပါလို့..”
ဒီအသက်အရွယ် ..ဒီခန္ဓာကိုယ်နဲ့…ချောင်းဆိုးသွေးပါတယ် ဆိုတော့…..အင်း…ဖြစ်နိုင်ချေကိုတော့ ခန့်မှန်းလိုက်မိပြီ… သေချာအောင် မေးခွန်းအနည်းငယ်ထပ်မေးလိုက်တော့…
အစက သလိပ်မထွက် ၊ချောင်းခြောက်ပဲဆိုးကြောင်း
စပ်ဆေးတွေဝယ်သောက်လိုက်၊ချောင်းဆိုးသက်သာရင် ရပ်ထားလိုက်၊ ပြန်ဆိုးရင် စပ်ဆေးထပ်ဂယ်သောက်လိုက်လုပ်နေရင်းက
မနေ့ညကမှ ချောင်းဆိုးရင်း သွေးပါလာလို့ ကြောက်လန့်ပြီး ဆေးန်းလာပြခြင်းဖြစ်ကြောင်းပြောလေသည်။
ဒါနဲ့ အခြားရောဂါလက္ခဏာတွေ ဆက်မေးတော့ ….
ချောင်းစဆိုးကတည်းကပင် အဖျားမကြီးသော်ငြားလည်း လူက နေလို့မကောင်း တရှောင်ရှောင်ဖြစ်နေကြောင်း
ညဘက်အိပ်လျှင် ချွေးစီးတွေပြန်ကြောင်း ပြောလေသည်။
” ညီမလေးက အရင်ကတည်းက ခုလိုပိန်ပိန်လေးပဲလား?”
” မဟုတ်ဘူးဆရာမ၊ သမီးက အရင်က ခုထက်အများကြီးပြည့်တာပေါ့၊ ခုတလောမှ အစားအသောက်တွေပျက်ပြီး ပိန်ကျသွားတာဆရာမရယ်…လူကိုဆွဲချလိုက်သလိုပဲ….မျက်ကွင်းတွေပါညိုကျပြီး သိသိသာသာကိုပိန်သွားတာ…. ချောင်းတွေဆိုးရပါများလို့လားမသိဘူးဆရာမရယ်…ရင်ဘတ်တွေတောင်အောင့်တယ် ”
” သမီးအရင်က တီဘီဖြစ်ဖူးလား၊ အခြားဘာရောဂါတွေဖြစ်ဖူးလဲ?”
“မဖြစ်ဖူးဘူးဆရာမ၊ ဆေးရုံဆေးခန်းတောင် ပြရခဲတယ်”
“ဒါဆို…အိမ်မှာ ဒါမှမဟုတ် အလုပ်တို့၊ အိမ်နားဝနိးကျင်တို့မှာရော တီဘီဖြစ်ဖူးတဲ့သူရှိလား?”
“အင်း…အဲ့လိုတော့ရှိတယ်ဆရာမ… လွန်ခဲ့တဲ့ ခြောက်လလောက်ကတော့ ရွာက ဦးလေးတစ်ယောက် သမီးတို့အိမ်မှာ တစ်လလောက်လာတည်းရင်း
ချောင်းဆိုးတာရက်ကြာနေလို့ ဆေးရုံသွားပြတာ ဆရာဝန်က TB ရှိတယ်ပြောလို့ TB ဆေးသောက်ရတယ်….ခုတော့ ရွာပြန်သွားပါပြီ”..
“သမီးခုဖြစ်နေတဲ့ လက္ခဏာတွေအားလုံးခြုံကြည့်လိုက်ရင်တော့ TB ဖြစ်နိုင်ချေအတော်များတယ်၊ပိုသေချာအောင် ရင်ဘတ် ဓာတ်မှန်လေးရိုက်၊ မနက်ပိုင်းထွက်တဲ့ သလိပ်လေး ၃ရက် ဆက်တိုက်စစ်ပြီး ဆရာမဆီ အဖြေလေးတွေ လာပြန်ပြပေး ပါလား ”
ဓာတ်မှန်အဖြေရော သလိပ်အဖြေရော ယူလာပြီးလာပြသည်။
ကလေးမကို ပြောပြတော့ငိုသည်….အလုပ်ထွက်ရမှာကြောက်လို့တဲ့….အင်းပေါ့… သူစိတ်ပူလည်းပူချင်စရာလေ…
ခုခေတ်က အလုပ်တစ်ခုရဖို့လွယ်တာမှ မဟုတ်တာပဲ…..
TB ဆေးစသောက်ပြီး နှစ်ပတ်ကြာလျှင် အခြားသူတွေဆီ ကူးသက်နိုင်ချေမရှိတော့ကြောင်း…
ဆေးစသောက်တဲ့အချိနိကစလို့ နှစ်ပတ်အတွင်းကိုတော့ မိသားစုများနဲ့လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များဆီမကူးစက်အောင် နှာခေါင်းစည်း (mask) တပ်ထားရမည်ဖြစ်ကြောင်း၊ အလုပ်ထွက်ဖို့ထိ မလိုအပ်ကြောင်း၊ ဆေးကို ၆လပြည့်သည်အထိ ပုံမှန်သောက်သင့်ကြောင်း၊ ၆လမပြည့်ဘဲဆေးရပ်လိုက်လျှင် နောက်ပိုင်းမှာ ဆေးယဉ်ပါးတီဘီဖြစ်လာနိုင်ပြီး ကုသရန်မလွယ်ကူကြောင်း… စသဖြင့် လိုအပ်တာတွေရှင်းပြနှစ်သိမ့်အပြီး TB ဆေးထုတ်ယူနိုင်ရန်သက်ဆိုင်ရာဒေသန္တရဆရာဝန်ထံ
Frequency of Making Love in Couples